Ngomntu omdala, kubonakala ukuba yonke into icacile, kodwa ukuba umbuzo uphathelene nempilo yomntwana omncinci, ngoko isihloko siba nengxabano, ingakumbi ukuba imalunga nempilo ukuya kunyaka. Kubalulekile ukukhumbula ukuba ngowomnyaka wokuqala wokuphila isiseko sempilo yomntwana sibeke. Masiqwalasele ngokukhawuleza kwiinyanga, oko kufuneka ukuba uyithobele.
Ngoko, inyanga yokuqala emva kokuzalwa. Ngethuba lwenyanga yokuqala yokuphila, umntwana usuqulela kwiimeko ezintsha zobomi, zonke izitho kunye neenkqubo zomntwana zilungiswa. Ingxaki eqhelekileyo eyenzeka ngethuba lobomi liyi-colic - intlungu ebuhlungu emathuneni obangelwa iigesi ezibangelwa ukuqhaqhazela isisu somntwana. I-Colic, njengomthetho, ihlala kwiinyanga ezintathu, zihlala ziphazamisa abafana, kunamantombazana. Ngokukodwa isondlo sesisu sabantwana, oomama babo ababelethwe ngecandelo lokulahla, bahlushwa. Isizathu salesi si-anesthesia esasetyenziswayo, i-antibiotics (ukuba umntwana unamathele ngokukhawuleza esifubeni), ukufakela ngokungathandekiyo esifubeni. Kubalulekile ukusebenzisa iindlela zokuthintela i-colic, njengokubekwa rhoqo kwintsana kwisisu, ukusetyenziswa kobushushu (oko kukuthi, ukuxhaphaza umntwana kwisandla sakhe, ukuchukumisa isisu sakhe emzimbeni wakhe), ubeke umntwana kwi-compress warmer compress, ukusetyenziswa kwe-massage ukukhanya. Kwimeko apho iindlela eziqhelekileyo zokuphelisa i-colic ayinakunceda, sebenzisa ukusebenzisa iziyobisi ezichasayo okanye ityhubhu yegesi. Yonke imiba yempilo yengane yokubeletha kufuneka ivumelwane nogqirha, onokunika ukubonisana ngokufanelekileyo.
Emva kokuphela kwenyanga yokuqala yobomi, umntwana kufuneka adibane neengcali eziphambili, ingakumbi i-neurologist kunye ne-orthopedist. I-orthopedist kufuneka ikhuphe ngaphandle kweemiphumo zokuphuhliswa kwebhokhwe, okokuqala, i-dysplasia yezihlanganisi ze-hip, torticollis. Ngokukhawuleza ukuba kubonakaliswe ukukhubazeka, kuya kuba lula ukunqanda nokukhusela ukungaphumeleli kokuphuhlisa. Abantwana abazalwa ngenxa yecandelo le-carearean, unyaka wokuqala wokuphila kufuneka ubonwe kwiprologist.
Emva kwenyanga yokuqala yobomi bomntwana, ugqirha ubeka inxaxheba yokukhusela i-vitamin D (ukususela ngoSeptemba ukuya ku-Ephreli kubandakanya).
Kwinyanga leyo kubalulekile ukudlulisa iimvavanyo ezisisiseko zegazi kunye nomchamo, ngakumbi ukuba uceba ukugonywa.
Izalathisi eziphambili zokuphuhliswa kwempilo yabantwana abangaphantsi komnyaka omnye zi: ukuphakama, ubunzima, ibhinti yentloko. Ezi zikhombisi zihlolwa ngokuhambelana nemimiselo equlunqwe ngokukhula kunye nophuhliso.
Kwiinyanga ezintathu umntwana kufuneka akwazi ukugcina intloko, ukuphendula kwisandi kunye nokunyuka kwabantu abadala.
Isibonakaliso sokuphucula impilo yintsana yiphupha. Iingxaki zokulala ezingapheliyo iingxaki kwimpilo yendoda encinane.
Ngomnyaka wokuqala wobomi, isitofu esisisiseko esiphathelene nezifo eziphambili senziwa.
Ukususela ngenyanga yesihlanu umntwana usasebenza, ngoko ngeli thuba kufuneka ube ngumnyameko kumntwana wakho ukuze ukhusele ukulimala okungenzeka. Ukuba, emva kwakho konke, ukuwa kwenzeka, kubalulekile ukunyamekela ukuziphatha komntwana kwaye ukuba kukho na ukungathandabuzeki (ukuxhala, ukukhala okude, njl.), Kufuneka uqhagamshelane nogqirha.
Ukususela kwinyanga yesithandathu (kunye nokuncelisa), i-lure isetyenziswe, ngoko kuqale ukusuka kweli xesha kubalulekile ukulungelelanisa kakuhle ukutya komntwana.
Ukufikelela kwiinyanga ezintandathu umntwana ulwa nezifo ngokuncedwa ngama-antibodies wamama, afunyenwe ngentambo. Ukuba umntwana usondla ngokusesikweni, ngoko-ke kwinyanga yesikhombisa iqala "ukutshatyalaliswa komzimba", oko kukuthi, umzimba ngokwawo uqala ukulwa nezifo ezizungezile.
Ukususela kwinyanga yeshumi elinanye umntwana usengozini kakhulu kwizifo ezizungezile. Izifo, njengomthetho, zibonakaliswa ngumkhuhlane ophezulu. Ekubeni iintsana ezincinci zixhomekeke ekubanjweni kweengxaki, ncokola nodokotela wezilwanyana ngeendlela zokunciphisa i-hyperthermia.
Kwiinyanga ezililishumi elinambini , nokuba umntwana unempilweni, kufuneka uhlolisiswe kunye neengcali ezizodwa (ugqirha, i-ENT, udokotela wamazinyo, i-neurologist). Oku kuya kunika ithuba lokuvavanya impilo yentsana yakho.
Khumbula, impilo yabantwana isezandleni zakho. Ukunyamekela ngokufanelekileyo, ukunyenga, ulwazi kunye nokusetyenziswa kolukhuni, iziseko zokusasaza kwezingane, i-gymnastics iya kuhamba kunye nokukhula okuhambelana nophuhliso lomntwana wakho.
Oko kufuneka ukwazi malunga nokushisa kwetrama
Indima yesondlo ekuphuhliseni i-caries kubantwana
Indlela yokuphepha ukulimala kwabantwana: iingcebiso kubazali
Inkukhu yenkomo: iimpawu, unyango
Ukucima konke: okokugqoka kwi-Eve Cock 2017
Iifake zamehlo amdaka - imihla ngemihla umfanekiso omtsha
Kwimitshato ephezulu kakhulu yenkwenkwezi ehlobo e-2015, no-Andrei Malakhov
I-pizza eneempom, i-mozzarella kunye ne-gorgonzola
I-anyanisi ekhethiweyo ne-Parmesan ushizi
Indoda yatshintsha njani emva komtshato?
I-Custard "i-Classic patissier"
Apho uhlala khona uSanta Claus
Ubunye Ubusuku Bothando Lungazange Luthandwe
Yintoni ebangela intlungu kwicala lasekunene?
Ukuhle kunye nokuchukumisa ukuzalwa kwintombi yakho kwindinyana kunye neprose